China API 11AX Bhora uye Chigaro cheSuburface Rod Pombi Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
* API inosimbiswa mugadziri
* Tungsten Carbide, Nickel / Cobalt / Titanium Bhainda
Pombi mavharuvhu akagadzirwa nemabhora nezvigaro uye iwo chinhu chakakosha kana uchinge uchishanda pasi peyakanyanya hydraulic kumanikidza nekuda kwekudzika. Dhizaini chete yakakwana uye nesarudzo chaiyo yezvinhu inogona kuvimbisa hupenyu hwavo hwebasa.
Mabhora evhavha uye zvigaro zvevhavha zvinoshandiswa zvakanyanya muminda yemafuta, mashandiro avo anokanganisa mashandisiro uye hupenyu hwebasa hwepombi. Imwe neimwe bhora-uye-chigaro musanganiswa yakavharirwa kuyedzwa kuve nechokwadi kuti chisimbiso chakakwana chinowanikwa munzvimbo dzese dzekubatana.
Tungsten carbide bhora & chigaro, chakagadzirwa kubva kumhandara mbishi zvinhu, zvine kukwirira kuomarara, kupfeka-kuramba, ngura kuramba, uye kuramba kukombama. Isu tinokwanisa kuendesa Carbide Mabhora mune akasiyana siyana anodiwa maratidziro anosanganisira TC Cobalt, TC Nickel uye TC Titanium, uye iyo TC Mabhora inogadzirwa maererano neiyo ISO uye Anti-Friction Kutakura Mugadziri Association (AFMBA) zviyero.
Iyo tungsten carbide vharuvhu bhora uye chigaro ichashandiswa zvakanyanya kune yakamira uye inofamba isina unidirectional vharafu mune dzakasiyana chubhu-mhando oiri yekukweva pombi nekuda kwavo kwakanyanya kuomarara, kupfeka uye ngura kuramba pamwe neakanaka anti-compression uye anodziya ekuvhunduka mavara ane akakwirira kupomba maitiro uye yakareba pombi cheki kutenderera yekusimudza jecha, gasi uye wakisi ine mafuta gobvu kubva mumatsime.
Mahara mabhora uye akapedza mabhora anogona kupihwa maviri. Standard uye asiri-akajairwa mabhora aripo.
API zvinhu giredhi bhora nezvigaro
API Bhora uye Seat Series
Isu tinokupa iwe vharuvhu bhora uye chigaro pre-sale masevhisi, mushure mekutengesa masevhisi ayo anosanganisira ekushambadzira kutungamira, ruzivo rwekupa & technical rutsigiro, hunyanzvi hwekudhirowa dhizaini, yekugadzira kuronga inopa, yekugadzira purogiramu, yekuongorora rutsigiro uye chitupa chinopa.
Pashure: Tungsten Carbide Bush yeMagetsi Akanyudzwa Pombi
Zvadaro: Kudzipwa Stem uye Seat